अदालतमा रूप ज्योतिले भने, ‘ज्योति ग्रुपलाई बद्नाम गर्ने षड्यन्त्र भयो’ - Arthakoartha.com
अदालतमा रूप ज्योतिले भने, ‘ज्योति ग्रुपलाई बद्नाम गर्ने षड्यन्त्र भयो’
काठमाडौं, २५ कार्तिक । ठगीको आरोपमा प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेका ज्योति ग्रुप अफ कम्पनीज्का उपाध्यक्ष डा. रूप ज्योतिलाई प्रहरीले आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएको छ ।
अदालतमा ज्योतिले आफूलाई ल्याण्डमार्क डेभलपर्सको सञ्चालकको पक्राउ पूर्जी दिएर समातिएको भन्दै आफू उक्त कम्पनीको सञ्चालक नै नरहेको बताएका छन् । आफूलाई गलत पक्राउ पूर्जीका आधारमा आफूलाई हिरासतमा राख्नुनै गैर कानुनी भएको उनको दाबी छ ।
उनले ज्योति ग्रुपलाई बद्नाम गराउने षड्यन्त्र स्वरुप कसैको उक्साहटमा पक्राउ गरिएको संकेत गरेका छन् । उनले आफ्नी छोरी सुरुची ज्योतिले कसैलाई नठगेको भन्दै बचाऊ गरेका छन् ।
रुप ज्योति पक्राउ पर्नुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोराको बार्गेनिङ मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । पूर्व अर्थराज्यमन्त्री, पूर्व सांसद् समेत रहिसकेका ज्योति अमेरिकाको प्रतिष्ठीत हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विद्यावारिधी हुन् । लामो व्यवसायिक विरासत बोकेका ज्योति परिवारमा रूप ज्योति स्वच्छ व्यवसायी मानिन्छन् ।
ज्योतिलाई फसाउने षड्यन्त्रमा सत्ताको दोहनकारी चरित्र उद्घाटित भएको छ । बादलका छोरा र महराका छोराले ज्योतिको ल्याण्डमार्क डेभलपर्सका तर्फबाट जग्गा विकासमा साझेदार बनेको सीई कन्स्ट्रक्सनमार्फत् बाँसबारी कोलोनीमा घर बुकिङ गर्ने विगेन्द्रकृष्ण मल्ललाई साथ दिई डा. रूप ज्योतिसँग फिरौती शैलीमा पाँच करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञा सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने फैसला गरेपछि ज्योतिले २०७५ मंसीर १३ मा चलनचल्तीको ब्याजसहित मल्लको पैसा फिर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै जिल्ल अदालतमा गएका थिए । तर मल्लले भने १६ गते ज्योतिले ठगी गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसरमा निवेदन दर्ता गराए । उनको निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ज्योतिलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । जिल्ला अदालतको पक्राउ पूर्जी विरुद्ध ज्योतिले २०७५ मंसीर २४ मा सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म ज्योतिलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कार्तिक १८ मा उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो । पक्राउ पूर्जी विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको पक्राउ पूर्जीका आधारमा प्रहरीले ज्योतिलाई पक्राउ गरेको हो ।
सेयर लगानीकर्तामा चुलिदो नैराश्यता, जानकार भन्छन : सरकारले सकारात्मक कदम नचाले बजारले तत्काल गति लिदैन
राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको क्यालेन्डरको बिमोचन